TOP 10 nhà hàng hải sản Hà Nội ngon và nổi tiếng cho dân sành ăn | Excitinghochiminhcity - Excitinghochiminhcity.Vn
TOP 10 nhà hàng hải sản Hà Nội ngon và nổi tiếng cho dân sành ăn | Excitinghochiminhcity
Chikafu chegungwa chikafu chakajairika, chinorondedzerwa sechinyakare cheVietnamese dish. Nekudaro, kwete kwese kwaunogona kunakidzwa zvinonaka uye zvitsva zvegungwa ndiro. Pamusoro 10 Hanoi seafood restaurant asi Digifood nezve kugovera pazasi ichakupa kuravira kwezvisingajairiki madhishi.
1 1. Hanoi Ocean House – Imba yekudyira yekudya kwegungwa muHanoi
2 2. Red Coral – yakakurumbira yekudya kwegungwa resitorendi muHanoi
3 3. Cuu Van Long – Hanoi seafood buffet restaurant
4 4. Seaside Seafood Restaurant
5 5. Pho Seafood – Hanoi’s fresh seafood restaurant
6 6. East Seafood
7 8. Street Seafood King – inonaka uye yakachipa yegungwa resitorendi muHanoi
8 9. Hong An Seafood
9 10. My Hanh Seafood
1. Hanoi Ocean House – Imba yekudyira yekudya kwegungwa muHanoi
Kero: 12 Hai Ba Trung, Hoan Kiem District
Mutengo: 500,000 VND – 2,500,000 VND
Nguva: 09:00 – 23:00
Iyi iresitorendi inonaka yegungwa muHanoi ine yakasarudzika uye yepamusoro-kirasi nzvimbo, mukati ichagadzirwa zvinoenderana nenzvimbo imwe neimwe yakaparadzana yekushandira kumisangano, mabiko kana mhuri. Iyo yekushongedza yese ndeyeumbozha, kamuri yega yega ichava neyakasiyana marongero, asi ese ane mahwindo ekubata chiedza kubva kunze. izvi a Hanoi restaurant sevhisi chimiro chakanyanya kuMadokero, inyanzvi uye ine hunhu.
Mufananidzo: Hanoi Ocean House- Seafood Restaurant
Zvokudya paHanoi Ocean House zvinogadzirwa zvinoenderana neakawanda maitiro ekubika munyika. Zvokudya zvine chokuita ne shrimp nguva dzose zvinonyanya kufarirwa nevatengi, zvakadai se: lobster yakakangwa ine tamarind, lobster yakakangwa nemunyu, shrimp salad, live lobster, lobster nebhotela muto, shrimp tomyum … Kunze kwezvo, iyo resitorendi zvakare yakajairwa. Kune nzvimbo yekuratidzira waini inowanikwa kune vaenzi kuti vasarudze vakasununguka kuenda nehove yegungwa.
2. Red Coral – yakakurumbira yekudya kwegungwa resitorendi muHanoi
Kero: 2B Nguyen Thi Thap, Cau Giay District
Mutengo: 100,000 VND – 1,000,000 VND
Nguva: 09:00 – 22:00
Red Coral ndizvo chikafu chinonaka chekudya chegungwa muHanoi ichangotangwa makore mashoma apfuura asi yave nzvimbo inofarirwa nevazhinji vanozvipira zvekudya zvemugungwa. Yekutanga inosimudzira ndeye nzvimbo, Red Coral ine kambasi hombe, ine zvese zvemukati uye gadheni nzvimbo. Mukati muchava nenhurikidzwa nhatu dzekuvaka, ine hurongwa hwemakamuri ega uye makamuri eVIP anoshandiswa kugamuchira vaenzi. Kunze, inzvimbo yekuronga mapato ekuzvarwa, michato kana kungoita nzvimbo yerudo yekuti vakaroorana vade kufambidzana.
Zvokudya zvegungwa pano zvinobva mutangi, saka zvinogara zvichivimbisa kutsva uye kunaka. Kudya kwega kwega kunogadziriswa zvine hungwaru kuunza vatengi zvitsva uye zvakasarudzika zviitiko zvekubika. Hotpot uye yakagochwa yegungwa muRed Coral ndiro dzinokosheswa zvakanyanya. Chikamu chepoto chinopisa chakanyatsogadziriswa uye chinodiridza mukanwa. Kune yakagochwa, pane zvakawanda zvingasarudzwa neabalone, scallops, nhema tiger shrimp, 2 clams, abalone, scallops, nhema tiger shrimp, 2 clams, mukaka oyster, makoko, scallops, squid, shellfish, Ropa cockles, spicy yakakangwa octopus …
3. Cuu Van Long – Hanoi seafood buffet restaurant
Kero: 6th Floor, Discovery Complex, 302 Cau Giay, Cau Giay District
Mutengo: VND 299,000 – VND 339,000
Nguva: 10:00 – 22:00
Cuu Van Long “akaita kondirakiti” iyo yese 6th floor yeDiscovery Complex chivakwa, saka nzvimbo yacho inofanirwa kunzi yakakura kwazvo. Uchipinda muresitorendi, iwe unobva waona mhenyu nharaunda yegungwa ichituhwina ichitenderedza uye ichitarisa zvakanyanya kubata maziso. Kutenda kune nzvimbo yakakura, matafura nezvigaro zvakaparadzana, zvichibvumira munhu wese kugara zvakanaka. Kune vanhu vazhinji, idya seafood buffet MuCuu Van Long chete, kune mazana akakwana epamhepo mapikicha ekudzosa.
Iyo yekudyira inoshandisa modhi yekubata chikafu chemugungwa chakananga patangi uye nekuchidzosera kukicheni yekubikira. Vanhu vazhinji vanotya kudya chikafu chegungwa chisina kubikwa vanogona kukumbira resitorendi kuti iite steam kana kuigadzirira uye kuiburitsa. Cuu Van Long inonyanya kupisa poto uye buffet yakagochwa, madhishi emugungwa akadai sehozhwa, shrimp, clams, makakanje akakangwa uye akakangwa zvakare akawanda asi asina kufarirwa sepoto inopisa. Iyo yekudyira ine buffet inopa appetizers, oddities uye madhiri, chikafu chinonaka, chinotengeswa nekukasira asi vashandi vanochizadza nguva dzose.
4. Seaside Seafood Restaurant
Kero: 89 Le Duc Tho, My Dinh Ward, Nam Tu Liem District
Mutengo: 150,000 VND – 550,000 VND
Nguva: 10:00–14:00, 17:00–22:00
Seaside Street ine nzvimbo yakapamhama uye ine mhepo, inova sarudzo yakanaka yezviitiko, mapati eshamwari kana kuungana kwemakambani. Iyo resitorendi ine mavara akajeka, inounza utsanana uye zvemazuva ano. Vashandi vanosarudzwa zvakasimba nechishuvo chekuwana zvakanakisisa zvehutano hwebasa.
Iine yakapfuma menyu uye dzakasiyana nzira dzekubika, Pho Bien yave resitorendi yegungwa muHanoi inonyanya kufarirwa. Zvizhinji zvendiro zvichagadzirirwa zvinoenderana neyakajairwa nzira yekudya yeVietnamese. Ndiro dzinoita kuti madhiri amire zvinofanirwa kutaurwa se: gaka nenyama yetamarind yakakangwa, shrimp rolls, eel yakagochwa ine galangal, mhiripiri yemunyu, hotpot yehove yakakacha ine nhungirwa dzakavava, hove dzakarukwa… Pho Bien akashandiswa pazasi tafura yemabiko ine 6-7 ndiro, saka iwe wakasununguka kusarudza chikafu chaunofarira.
5. Pho Seafood – Hanoi’s fresh seafood restaurant
Kero: 48 Lieu Giai, Cong Vi Ward, Ba Dinh District
Mutengo: 300,000 VND – 1,000,000 VND
Nguva: 10:00 – 22:30
Pho Seafood yanga ichishanda kubvira 2016 uye yakakurumidza kuhwina moyo yevanodya. Iyo resitorendi inounza yemhando yepamusoro, yemhando yepamusoro, ndiyo nzvimbo yakakodzera yekuitira mapati kana misangano yakakosha. Kunyanya, muridzi weresitorendi akatarisana nekugadzira nzvimbo yakasvibira yevanodya kuti vanzwe vakasununguka uye vanakirwe mukudya kwega kwega.
Mufananidzo: Pho Seafood – 48 Lieu Giai
Iresitorendi inopa zvidyo zvitsva zvegungwa, izvo vashanyi vanozosarudza kubva kunze vozouya nevashandi vekukicheni kuti vagadzirise. Paunenge wakamirira dhishi kuti riuye, unogona kuodha mamwe madhishi akakosha akadai sashimi, porridge, saladhi, garlic chingwa kuti udye. Oyster yakakanyiwa ine cheese ndiro inosarudzwa nevatengi vakawanda, oyster ane mukaka wakawanda, vana vahombe vanowedzera greasy cheese inodhaka zvikuru. Kana iwewo uchida kuyedza imwe ndiro inopisa uye ine mafuta, unogona kusarudza lobster yakagochwa nechizi, nyama yegakanje ine curry muto…
6. East Seafood
Kero: Nhamba 2 Alley 84 Tran Thai Tong, Dich Vong Ward, Cau Giay District
Mutengo: 300,000 VND – 550,000 VND
Nguva: 10:30 – 14:00 | 17:00 – 21:00
East Seafood ine maresitorendi akawanda aripo munzvimbo zhinji dzine mukurumbira dzekudyira Hanoi. Bazi reTran Thai Tong rine nzvimbo yakavhurika, yakatenga 5 pasi kuti ishumire nhamba huru yevatengi. Manheru, resitorendi yakazara vanhu, asi vashandi vanoramba vachifarira, vane mutsa uye vakagadzirira kubatsira kana iri nguva yako yekutanga kuuya kuEast Sea.
Mufananidzo: East Seafood
Iyo yekudyira inogara yakatarisa kunaka kwechikafu, inofanirwa kuve nechokwadi maitiro ehutsanana – nyowani – inonaka. Vaenzi vachaenda kudhamu kuti vasarudze zvokudya zvegungwa izvo “zvakatemerwa” navo uye kumbira mubiki kuti abike sezvavanoda. Hunhu hweEast Sea iAlaska lobster, tiger shrimp, gakanje rechando, gakanje rezvidhinha, bamboo shrimp uye tu hai. Kazhinji vaenzi vanosarudza kudya ndiro dzakabikwa dzakabikwa nemasosi ekunyudza kuti vatore kunaka kwekudya kwegungwa.
Kero: 7A Tran Hung Dao, Dunhu reHoan Kiem
Mutengo: 100,000 VND – 500,000 VND
Iyo yekudyira inovakwa pakati chaipo peTran Hung Dao facade, mwenje uri kupenya husiku, zvichiita kuti chero munhu anopfuura napo afadzewo. Iyo yemukati inovakwa yakafara, yakakamurwa munzvimbo dzakawanda dzakasiyana, pane nzvimbo yakaparadzana yevaenzi kuronga mapato, kuronga zviitiko zvakaita sepfupiso, mazuva ekuzvarwa, etc. Pakazara, iyo resitorendi inotaridzika yakasarudzika uye yemazuva ano. Mifananidzo yakawanda yegungwa kugadzira iyo kunzwa kwekugara mu “Seafood World”.
Mufananidzo: Seafood World
Zvokudya paresitorendi zvakagadzirirwa zvakapfuma, zvokudya zvegungwa zvitsva zvinobikwa nemaoko emubiki ane makore anopfuura makumi maviri ane ruzivo. Chikafu icho vanhu vazhinji vanoda kuyedza ndeye Olive halibut inotengwa kubva kuJeju Island, Korea, ine mutengo pa2,450,000 VND/kg. Nekudaro, kune vanhu vazhinji vane bhajeti shoma, vanogona kusarudza zvinonaka zvakadai se: muto wegungwa remugungwa, poto inopisa yegungwa, Thai shrimp soup, lobster yakagochwa nechizi, maclams ane lemongrass, oyster mbishi, etc.
8. Street Seafood King – inonaka uye yakachipa yegungwa resitorendi muHanoi
Kero: 21 Ngu Xa, Ba Dinh District
Mutengo: 50,000 VND – 100,000 VND
Nguva: 09:00 – 21:00
Mambo weStreet Seafood ndiye Inonaka yekudyira yegungwa muHanoi inonyanya kufarirwa nevechidiki muHa Thanh. Iresitorendi ine nzvimbo inotonhorera, kwete yakakura zvakanyanya, yakakodzera kuungana kweshamwari kana kudya kwemhuri. Pamusoro pazvose, aya mashoma maresitorendi ezvokudya zvegungwa ane mitengo inonzwisisika asi achiri kuona mhando.
Mufananidzo: King of Street Seafood
Misiyano yeresitorendi ndeyokuti inoshandisa hove yegungwa, iyo izere nemakanje, tiger shrimp, nail snails, squid, crabs, clams … Muto wemam unokosha zvikuru, mubiki akashanda kwemakore akawanda kuti aite. dzidza kubva pane zvakaitika pakugadzira iyi sosi yakasarudzika. Kunze kwaamai, unogona kusarudza hot poto yegungwa ine spicy Thai hot pot. Kune akawanda madhishi asinganzwisisike, akadai seakagochwa oyster ane mafuta ehanyanisi, octopus yakagochwa ine satay, shrimp yakagochwa ine satay, zvigunwe zvinotapira uye zvakakangwa …
9. Hong An Seafood
Kero: 111 D1 Dang Van Ngu Street, Nam Dong, Dong Da
Mutengo wepakati: 100,000 VND – 500,000 VND
Nguva: 08:00 – 22:00
Hong An izita rinozivikanwa kune vanoda chikafu chegungwa muHanoi. Nzvimbo yekudyira haina kunyanya kukosha, inokwanisika, yakakodzera munhu wese. Kuuya pano kuzoungana kazhinji vashandi vemuhofisi, mapoka evadzidzi kana mhuri dzevanhu 2-4.
Mufananidzo: Hong An Seafood
“Seafood mukbang” izita rinopihwa nevadyi kuresitorendi yakasanganiswa yezvokudya zvegungwa. Hong An inyanzvi mukushandira macombos emugungwa ane muto unotapira uye unonhuwirira. Iyo combo ichaenderana nesarudzo yemutengi, kazhinji inosanganisira crayfish, clams, squid, king crab, chibage, mazai akabikwa … Inoyevedza zvakaenzana, pane squid yakagochwa ine satay, hozhwa dzakakangwa dzine lemongrass munyu uye lemon mhiripiri, Sauce scallops, magakanje akabikwa, shrimps ine cheese sosi…
10. My Hanh Seafood
Kero: 102 To Huu, Dunhu reHa Dong
Mutengo: 150,000 VND – 500,000 VND
My Hanh iresitorendi yegungwa muHanoi ine hunhu hweVietnamese, inounza kujairana uye kuswedera. Nzvimbo yacho yakakura, asi yakanyarara. Iyi nzvimbo yakakodzera chete kana uchienda nevanhu vashoma. Kuuya kuresitorendi unogona kusarudza kugara mukati kana kunze. Kana iwe uchida kuti chikafu chako chiwedzere kunakidza uye kugadzikana kutaura, tinokurudzira kugara panze padenga remba.
Mufananidzo: My Hanh Seafood
Zvokudya zvemugungwa muMy Hanh zvakatsva uye zvakakura kwazvo, iyo yekudyira yakaiswa mari mukushongedza. Ndiro imwe neimwe yechikafu yakafanana nebasa rakasiyana. Iyo menyu yakasiyana, yakapfuma mukugadzirisa, yakapfuma mumwaka uye Vietnamese zviyero. Vaenzi vanouya pano vanowanzoodha madhishi akadai seakabikwa cheese shrimp, gakanje rine tamarind muto, gakanje rechando rakabikwa, munyu shrimp, tamarind sauce uye hotpot inokosha yeThai yegungwa.
Pamusoro pane 10 yepamusoro Hanoi seafood restaurant Iyo inonyanya kusarudza iyo Digifood inoda kugovera newe. Huya unakirwe izvozvi kana usingakwanise kuramba chishuwo chekudya chegungwa nhasi.
Ona mamwe kero emhando yezvokudya zvegungwa:
READ 2 cách phi hành giòn lâu, vàng ruộm, thơm nức mũi | Excitinghochiminhcity
← Dalat Milk Farm điểm “sống ảo” chất ngất tại Đà Lạt | Excitinghochiminhcity
Kinh nghiệm du lịch Vườn Xoài tự túc 2021 nổi tiếng Đồng Nai | Excitinghochiminhcity →